KATHMANDUTemperature 16°CAir Quality181
साताका ७ स्टोरीमा हिप्पी युग सम्झाउने झोछेँको भित्तोदेखि प्यारासाइटको ओस्कार यात्रासम्म
२ फाल्गुन २०७६ शुक्रबार
हिप्पीहरुको कलात्मक भित्तो कसरी बन्यो प्रेमको निशानी ? (भिडियो)
स्‍नोम्यान सामान्य क्याफे हो । हिप्पीहरुले ‘फ्रिक स्ट्रिट’ नाम दिएको झोछेँको यो सामान्य क्याफेका भित्ताहरु नियालेर हेर्ने हो भने यहाँ अनगन्ती असामान्य कथा भेटिन्छन् । १९६५ देखि चलिरहेको यो क्याफेका भित्तामा हिप्पीले बनाएका पेन्टिङ छन् । ती पेन्टिङमाथि नेपाली युवायुवतीले पोखेका भावना पनि रंगिएका छन् । हेर्नुस् रविराज बरालको भिडियो
समाजवादले इतिहासबाट के सिक्न सक्छ ? (पोडकास्ट)
न व्यापार, न नाफा, न शोषण । न कोही गरिब र भूमिहीन, न कोही धनी, जमिनदार र उद्योगपति । कागजमा समाजवादको यो अवधारणा उत्कृष्ट देखिन्थ्यो तर यथार्थ अर्कै निस्क्यो । जीवन क्षत्रीको लेख पोडकास्टमा सुन्नुस् ।
मथिंगल खल्बल्याउने ‘प्यारासाइट’ को ओस्कार यात्रा
सधैँजसो आलोचना हुन्थ्यो– ओस्कार अमेरिकी र पश्चिमा फिल्मका लागि हो । तर यस पटक एसियाली फिल्मले यो अवार्ड जितेको छ । कोरियन चलचित्र प्यारासाइटले ओस्कार अवार्डको ९२ औँ संस्करणमा ६ वटा विधामा मनोनीत भए पनि ४ वटा अवार्ड जितेको छ । यसले सर्वोत्कृष्ट चलचित्र, सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र, निर्देशन र पटकथामा जित्दै इतिहास रचेको छ । पढ्नुस् सुनिता लोहनीको समीक्षा
कान्तिपुर कन्क्लेभमा विचार व्यक्त गर्दै महेश मास्के । इलिट जोशी
भारत र चीनलाई चिनाउन प्रयोग गरिने हात्ती र ड्रयागनजस्ता प्रतीकको बीचमा नेपाल ‘तरुल’ का रुपमा चित्रित हुने गरेको छ । यो प्रतीकको प्रयोग नसुहाउँदो र अऐतिहासिक छ । २१ औँ शताब्दीको बदलिँदो भूराजनीतिक स्थिति र नेपालका छिमेकीसँगको सम्बन्धप्रति न्याय गर्न ‘तरुल’ वा ‘घाँस’ जस्ता प्रतीक अपनाउनु आफ्नै अवमूल्यन गर्नु हो । पढ्नुस् महेश मास्कोको लेख
रुखहरुको बिदाइ वार्ता : सप्ताहान्त साहित्य
रुख, चरा र जून । सरोज बैजु
वायु, पानी र आफ्नो दहनमा लागेको
अग्निको पनि चिन्ता गर्दै थिए
हामी नहुँदा यी केबाट प्रज्वलित होलान् र ? पढ्नुस् सप्ताहान्त साहित्यमा राजवको कविता
प्रहरीभित्रको गैरव्यावसायिक व्यवहार निर्मूल गर्छु : नवनियुक्त प्रहरी प्रमुख (भिडियो)
पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले ’गैरव्यावसायिक व्यवहार निर्ममतापूर्वक निर्मूल गरिने’ प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विवादैविवादमा फसेको प्रहरी संगठनको छवि सुधार्न उनको पाँच महिने कार्यकाल कति पर्याप्त होला ? हेर्नुस् भिडियो
ज्येष्ठ नागरिक ८ महिनादेखि भत्ताबाट वञ्‍चित, यसरी भयो रकम फ्रिज
सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गर्दै वृद्धवृद्धा । भरत जर्घामगर
१ हजार २ सय १५ जनाले ८ महिनाको भत्ता पाएनन् । आठ महिनाको रकम नपाएपछि कर्मचारीले गायब गरेको भन्दै वृद्धवृद्धाको र्‍यालीले पटक–पटक गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गर्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन । पढ्नुस् भरत जर्घामगरको रिपोर्ट